सरकारले दिने भनेको २५ लाख रुपैयाँ लगानीबाट कस्ता–कस्ता काम गर्न सकिन्छ ? यस्तो छ नीति पढ्नुहोस – List Khabar
Home / समाचार / सरकारले दिने भनेको २५ लाख रुपैयाँ लगानीबाट कस्ता–कस्ता काम गर्न सकिन्छ ? यस्तो छ नीति पढ्नुहोस
सरकारले दिने भनेको २५ लाख रुपैयाँ लगानीबाट कस्ता–कस्ता काम गर्न सकिन्छ ? यस्तो छ नीति पढ्नुहोस
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 550 Views
Previous आज बिहानै देखि काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा ब्यापक परिबर्तन, निषेधाज्ञा खुकुलो, के के गर्न पाइन्छ?
Next चार बिघा क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर दुई युवाले सुरु गरे कागती खेती, कमाउछन् लाखौ